Ectopic Pregnancy (သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Ectopic Pregnancy (သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း)
Ectopic Pregnancy (သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့အခါ မျိုးဥအောင်ခြင်းဟာ သားအိမ်ပြွန်မှာ ဖြစ်ပေါ်ပြီး သားအိမ်သို့ ရွေ့လျားသွားပါတယ်။ ၎င်းသားအိမ်နံရံမှာ သူကိုယ်တိုင်တွယ်ကပ်ပြီးနောက် သန္ဓေသားငယ် ဖြစ်လာပါတယ်။
သို့သော်မျိုးအောင်ပြီး သားဥဟာ သားအိမ်သို့ ဆင်းသွားရမယ့်အစား သားအိမ်ပြွန်မှာတွယ်ကပ်ပြီး ကြီးထွားတဲ့ အခြေနေများလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေဟာ အလွန်အန္တရာယ် ရှိသောအခြေအနေ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရဲ့ ပထမပတ် အတောအတွင်းတွေမှာ ဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေ အများစုမှာ ကလေးကို ဆက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရာ မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။
Ectopic Pregnancy (သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးအယောက် ၅၀မှာ ၁ယောက်နှုန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Ectopic Pregnancy (သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
• မိန်းမကိုယ်မှ သွေးအနည်းငယ် ဆင်းခြင်း၊
• ပျို့ခြင်းနှင့် အန်ခြင်း
• ဝမ်းဗိုက်တွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆွဲညှစ်ထားသလို ခံစားရခြင်း
• ခန္ဓါကိုယ်၏ တစ်ဖက်ခြမ်း နာကျင်ခြင်း
• မူးဝေခြင်း သို့မဟုတ် အားနည်းခြင်း
• ပခုံး၊ လည်ပင်း သို့မဟုတ် စအိုနာကျင်ခြင်း
• မူးမေ့ခြင်း( ဖြစ်လေ့မရှိပါ ) စတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Ectopic Pregnancy (သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုတော့ ထင်ရှားသိသာစွာ မသိသေးပါဘူး။ သို့သော် အချို့အချက်တွေက သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို မြင့်စေနိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များမှ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို မြင့်စေသောအရာများကို ကျေးဇူးပြု၍ဖတ်ကြည့်ပါ။
Ectopic Pregnancy (သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
• သန္ဓေတားရန်အတွက် သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်းများ ထည့်၍ သန္ဓေတားခြင်း၊
• ကလက်မိုင်းဒီးယား(chlamydia)ရောဂါနှင့် ဆီးပူညောင်းကျ ရောဂါကဲ့သို့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားသော ရာဇဝင်ရှိခြင်း၊
• မမျိုးဥပြွန်ရောင်ခြင်း၊ သားအိမ်ပြွန်နှင့် မမျိုးအိမ်များ ရောင်ရမ်းသည့်ရောဂါ ရာဇဝင်များရှိခြင်း ၊
• မွေးရာပါ သားအိမ်ပြွန် ပြဿနာ ရှိခြင်း၊
• သားအိမ်အတွင်းလွှာရှိ တစ်ရှူးများ အခြားနေရာ၌ တွေ့ရသော ရောဂါကြောင့် သို့မဟုတ် သားအိမ်၊ သားအိမ်ပြွန်နှင့် မျိုးဥအိမ်များ ခွဲစိတ်ထားသော ရာဇဝင်ရှိသောကြောင့် ၎င်းနေရာများမှာ အမာရွတ်များ ကျန်ခြင်း၊
• မူမမှန် နေရာမမှန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားဖူးသော ရာဇဝင်ရှိခြင်း၊
• ခွဲစိတ်၍ သားကြောဖြတ်ရာ၌ သားအိမ်ပြွန် ချည်ရာတွင် မအောင်မြင်သောရာဇဝင် ရှိခြင်း၊
• ကလေးရရန် ဆေးသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်ပြွန်သန္ဓေ သားကဲ့သို့ အခြားမျိုးမအောင်ဖူးသော ကိစ္စများရှိခြင်း၊
• ကိုယ်ဝန်မရှိခင်ထိ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ၊
• မိခင်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ diethylstilbestrol ဆေးကို သောက်ခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Ectopic Pregnancy (သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း ဟုတ်မဟုတ် အဖြေရှာ အတည်ပြုရန် အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
တင်ပါးဆုံပိုင်း ဆိုင်ရာစမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်း – ၎င်းကဲ့သို့စမ်းသပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ဆရာဝန်ဟာ သင့်မူမမှန်ခြင်း ဟုတ်မဟုတ် ဖော်ပြနိုင်တဲ့ သားအိမ်ပြွန်အတွင်းက အလုံး သို့မဟုတ် ကြီးထွားမှု တစ်ခုခု စစ်ဆေးအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
သင့်သားအိမ်ရဲ့ အရွယ်အစားကိုလည်း စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် ကိုယ်ဝန်တစ်ခုမှာ သားအိမ်ရဲ့ အရွယ်အစားဟာ ကြီးလာပါလိမ့်မယ်။ နေရာမမှန် မူမမှန် သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်းမှာတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။
အာထရာစောင်း ရိုက်ပြီး သားအိမ်နဲ့ သားအိမ်ပြွန်ရဲ့ အခြေအနေကို သိနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းစစ်ဆေးမှုမှာ သင့်ကိုယ်ဝန်ဟာ ဘယ်မှာသွားသန္ဓေတည်နေသလဲ ဆိုတာကို အသိနိုင်ဆုံးစစ်ဆေးမှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အစောပိုင်းကာလ မှာပဲ အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဟော်မုန်းပမာဏကို စစ်ဆေးရန် သွေးစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းမှာ HCG ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းဟာ၂ရက် ကြာတိုင်းကြာတိုင်းမှာ တက်နေလေ့ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေမှာဆိုရင် ဟော်မုန်းပမာဏ များကာ သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတြည်ခင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Ectopic Pregnancy (သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
နေရာမမှန် သန္ဓေတည်ခြင်းကို သင့်ကိုယ်ဝန် ဘယ်နှစ်ပတ်မှာ အစောဆုံး တွေ့ရသလဲဆိုတာ နှင့် သင့်ရဲ့အခြေအနေ အားလုံးပေါ် မူတည်ပြီး ကုသနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ နေရာမမှန် သန္ဓေတည်ခြင်းကို စောစောတွေ့ရှိရပြီး သားအိမ်ပြွန်မပေါက်သေးဘူးဆိုရင် ၎င်းဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်စေတဲ့ အရာတွေကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကုသမှုများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကတော့
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဟော်မုန်းပမာဏ ၅၀၀၀ အောက်ရှိသောအချိန်နှင့် သန္ဓေသားမှာ နှလုံးခုန်သော လှုပ်ရှားမှု မတွေ့သောအချိန်တို့တွင် Methotrexate ကဲ့သို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ရှူးကြီးထွားမှုရပ်စေသော ဆေးများသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
HCGဟော်မုန်းပမာဏ များပြီး သွေးထွက်နေသောအခါ
ပျက်စီးနေသောနေရာများကို ပြန်ပြုပြင်ပေးရန် ဝမ်းဗိုက်ကိုအပေါက်ဖောက်၍ သန္ဓေသားကို ဖယ်ထုတ်ကာ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူဖို့လည်းလိုပါတယ်။
သားအိမ်ပြွန်မှာ အသေးစားခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ပြီး သင့်ရဲ့သားအိမ်ပြွန် ကျန်းမာလာအောင် ပြန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သန္ဓေသားဟာ ကြီးထွားလာပြီး သားအိမ်ပြွန်ပေါက်ကွဲ လာပြီဆိုရင် သွေးတိတ်စေဖို့အတွက် အရေးပေါ် ခွဲစိတ်ကုသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သားအိမ်ပြွန်နှင့် မျိုးဥအိမ်တွေဟာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင် ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရှားဖို့ရာ အတွက် ခွဲစိတ်ရန် လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။
Etopic pregnancy. http://www.webmd.com/baby/guide/pregnancy-ectopic- pregnancy. Accessed July 12,
Etopic pregnancy. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ectopic- pregnancy/basics/definition/con-20024262. Accessed July 12, 2016.
Etopic pregnancy. http://www.healthline.com/health/pregnancy/ectopic-pregnancy. Accessed July 12, 2016.Etopic pregnancy. http://www.webmd.com/baby/guide/pregnancy-ectopic- pregnancy. Accessed July 12,